စည်းကမ်းချက်များ - Vogate အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
ငွေကြေးတခုရွေးပါ GBP (ပေါင်)AED (د.إ)AFN (؋)အားလုံး (လ)Ang (ƒ)ARS (ဒေါ်လာ)AUD (ဒေါ်လာ)AWG (Afl ။ )AZN (AZN)BAM (ကီလိုမီတာ)BBD (ဒေါ်လာ)BGN (лв။ )BMD (ဒေါ်လာ)BND (ဒေါ်လာ)အလုပ်အကိုင်BRL (R $)BSD (ဒေါ်လာ)BWP (P)BYN (ဘ)BZD (ဒေါ်လာ)CAD (ဒေါ်လာ)CHF (CHF)CLP (ဒေါ်လာ)CNY (ပေါင်)COP (ဒေါ်လာ)စီအာစီ (₡)CUP (ဒေါ်လာ)CZK (KC)DKK (DKK)DOP (RD $)EGP (EGP)ယူရို (€)FJD (ဒေါ်လာ)FKP (£)GGP ()GHSGIP (£)GTQ (မေး)GYD (ဒေါ်လာ)ဟောင်ကောင် (ဒေါ်လာ)HNL (L)HRK (kn)ဝ (Ft)IDR (Rp)ILS ()IMP (£)INR (ပေါင်)IRR ()ISK (kr ။ )JEP ()JMD (ဒေါ်လာ)JPY (ပေါင်)စလိုဗက် (сом)KHR ()KPW ()KRW (₩)KYD (ဒေါ်လာ)KZT (₸)LAK (AK)LBP (ل.ل)LKR ()LRD (ဒေါ်လာ)MKD (ен)MNT (₮)MUR (₨)MXN (ဒေါ်လာ)MYR (RM)MZN (MT)NAD (N $)NGN (₦)NIO (C $)NOK (kr)NPR ()NZD (ဒေါ်လာ)OMR (ر.ع. )PAB (ခ / ခ)ဘောပင် (S /)PHP (အက်ပ်)PKR ()PLN (ZL)PYG ()QAR (ر.ق)RON (လိုင်)RSD ()RUB (ပေါင်)SAR (ر.س)SBD (ဒေါ်လာ)SCR ()SEK (kr)SGD (ဒေါ်လာ)SHP (£)SOS (Sh)SRD (ဒေါ်လာ)SVC ()၊SYP (ل.س)THB (฿)ကြိုးစားကြည့်ပါ (₺)TTD (ဒေါ်လာ)TVD ()TWD (NT $)ယူဂန် (₴)အမေရိကန်ဒေါ်လာ ($)ယူအေ ($)UZS (UZS)VEF (Bs F)VND (ပေါင်)XCD (ဒေါ်လာ)YER (﷼)ZAR (R)ZWD () reset
ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (စည်းကမ်းချက်များ) နောက်ဆုံးမေလ 20, 2021 ရက်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Vogate ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့်ဘဝတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမည်သည့်လူကိုမဆိုပညာရေးအကြောင်းအရာ (ရောင်းချသူများ) ကို ဖန်တီး၍ မျှဝေရန်နှင့်ထိုပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို (ကျောင်းသားများ) သင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ပုံစံကိုအသုံးပြုသူများအားအဖိုးတန်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ပလက်ဖောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားနှင့်ရောင်းချသူအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လုံခြုံစေရန်စည်းမျဉ်းများလိုအပ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်သင်၏ Vogate ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ Vogate မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီအပလီကေးရှင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ APIs နှင့်အခြားဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်သည်။“ ဝန်ဆောင်မှုများ”).
သင် Vogate ပလက်ဖောင်းတွင်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေလျှင်သင်သဘောတူရမည် ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်ရောင်းချသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးသည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ။ အကယ်၍ သင်သည် Vogate အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသင်၏အဖွဲ့အစည်း၏ Vogate for စီးပွားရေးစာရင်းပေးသွင်းခြင်းတွင်အသုံးပြုနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Vogate for Business Privacy ဖော်ပြချက်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ပါကဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်၊ Vogate နှင့်အငြင်းပွားမှုများကိုခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းရန်သင်သဘောတူသည် (တရားရုံးမှမဟုတ်ဘဲအလွန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ) ။ အငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပိုင်း၌။
1 ။ accounts ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်မှလှုပ်ရှားမှုအများစုအတွက်သင်စာရင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ သင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်နွှယ်သောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်သင်တာ ၀ န်ရှိသောကြောင့်သင်၏စကားဝှက်ကိုတစ်နေရာရာမှာလုံခြုံအောင်ထားပါ။ အခြားသူတစ် ဦး ကသင်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုသင်သံသယရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ Support Team သို့။ Vogate ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏တိုင်းပြည်ရှိအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သဘောတူညီချက်၏အသက်ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိလှုပ်ရှားမှုများအများစုအတွက်သင့်တွင်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်၊ ၎င်းမှာပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်အကြောင်းအရာတင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်မှန်ကန်သောအီးမေးလ်အပါအ ၀ င်တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်ပေးအပ်ရမည်။ သင်၏အကောင့်နှင့်သင်၏အကောင့်တွင်ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးတို့တွင်သင်၏အကောင့်နှင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲထိခိုက်နစ်နာမှု (ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး) အတွက်သင့်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စကားဝှက်ကိုသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားသင်ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်အကောင့်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်ခွင့်တောင်းခံရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါကသင့်အားထိုအကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးအပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သေဆုံးသွားလျှင်၎င်းအကောင့်ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
သင်၏အကောင့် login အထောက်အထားများကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အားမျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အကောင့်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်မှုအတွက်သင်၌တာဝန်ရှိသည်၊ Vogate သည်ကျောင်းသားများ (သို့) အကောင့် ၀ င်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျှဝေထားသည့်ရောင်းချသူများအကြားအငြင်းပွားမှုများတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏တစ်စုံတစ် ဦး သည်သင်၏အကောင့်ကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ (သို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံရေးလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုဟုသံသယရှိလျှင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသင်ကြားပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည် Support Team သို့။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ပိုင်ရှင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်အချို့တောင်းခံနိုင်သည်။
Vogate တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ကျောင်းသားများနှင့်ရောင်းချသူများသည်အနည်းဆုံးအသက် ၁၈ နှစ်ရှိရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်သော်လည်းသင်နေထိုင်သည့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုရန်သဘောတူရန်လိုအပ်သောအသက်အထက် (ဥပမာ၊ အမေရိကန်မှ ၁၃ ခုသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်တွင် ၁၆ နှစ်) ဖြစ်ပါကသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်။ မရပါ၊ သို့သော်မိဘတစ် ဦး ကိုဖိတ်ကြားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်။ သို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ သင့်အတွက်သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကိုရယူနိုင်အောင်ကူညီရန်အုပ်ထိန်းသူ။ အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ဤခွင့်ပြုချက်၏အသက်အရွယ်အောက်ရောက်နေပါက Vogate အကောင့်ကိုသင်မဖန်တီးနိုင်ပါ။ ဤစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သောအကောင့်တစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါကသင့်အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းသွားမည်။ ငါတို့လက်အောက်တွင် ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များVogate တွင်ထုတ်ဝေရန်အကြောင်းအရာကိုသင်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းမှီ၊ သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်တစ် ဦး သင်တန်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာစာရင်းသွင်းတဲ့အခါ, သင် Vogate န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်ငါတို့ထံမှလိုင်စင်ရနှင့်အခြားအသုံးပြုမှုမရှိ။ အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်သို့မဟုတ်ပေါ်လစီဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သို့မဟုတ် Subscription အစီအစဉ်များမှတဆင့်ကျောင်းအပ်ရန်အတွက်အကြောင်းအရာများကိုပိတ်ထားရသည့်အချိန် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်အားတစ်သက်တာခွင့်လိုင်စင်ပေးသည်။
ငါတို့လက်အောက်တွင် ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များရောင်းချသူများက Vogate တွင်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေသည့်အခါ၊ Vogate သည်ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းအရာအားလိုင်စင်ပေးရန်လိုင်စင်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စာရင်းသွင်းထားသောကျောင်းသားများအားအကြောင်းအရာကိုလိုင်စင်ချထားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်အခမဲ့သို့မဟုတ်ပေးဆောင်ထားသောအကြောင်းအရာဖြစ်စေသင်သင်တန်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများတွင်သင်စာရင်းသွင်းသည့်အခါ Vogate မှ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန် Vogate မှလိုင်စင်ရသည်။ Vogate သည်မှတ်တမ်းလိုင်စင်ရသူဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင့်အားလိုင်စင်ရထားပြီးမဟုတ်ပါ။ ဤလိုင်စင်သည်အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုပြန်လည်ရောင်းချရန်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုပေးသည် (ဝယ်သူနှင့်အကောင့်အချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာကိုတရားမ ၀ င်ကူးယူခြင်းနှင့် torrent ဆိုဒ်များတွင်မျှဝေခြင်းအပါအ ၀ င်) အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
တရား ၀ င ်၍ ပိုမို၍ ပြည့်စုံသောဝေါဟာရများအရ Vogate သည်သင် (ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်) သင်၏ကန့်သတ်ထားသော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်း။ မရသောလိုင်စင်အားသင်၏လိုအပ်သောအခကြေးငွေအားလုံးကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏သီးခြားအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။ အခြားအသုံးပြုမှုအားလုံးကိုအတိအလင်းတားမြစ်သည်။ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ဝေငှခြင်း၊ ထုတ်ချေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်း၊ တစ် Vogate အခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စာဖြင့်ရေးသားသဘောတူညီချက်၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ APIs များမှတဆင့်သင်ရယူနိုင်သောအကြောင်းအရာနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားသင်တန်းသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများတွင်စာရင်းသွင်းသည့်အခါတစ်သက်တာခွင့်လိုင်စင်ကိုပေးသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ပေါ်လစီဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ပေါ်လစီဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ပေါ်လစီဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အကြောင်းအရာများကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်နှင့်ပိတ်ဆို့ရန်တာဝန်ရှိသည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုအသုံးပြုခွင့်နှင့်မည်သည့်လိုင်စင်ကိုမဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သင်စာရင်းသွင်းထားသောအခြားအကြောင်းအရာမှာမူပိုင်ခွင့်တိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ ဤတစ်သက်တာလက်လှမ်းလိုင်စင်သည်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်များ (သို့) သင်စာရင်းသွင်းသည့်သင်နှင့်သင်စာရင်းသွင်းသည့်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထပ်ဆောင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စျေးသည်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ကြားရေးအထောက်အပံ့သို့မဟုတ် Q & A ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, တစ်သက်တာလက်လှမ်းမီမှုသည်သင်တန်းအကြောင်းအရာနှင့်ရောင်းချသူမဟုတ်ပါ။
၃။ ငွေပေးချေခြင်း၊ ချေးငွေနှင့်ပြန်အမ်းခြင်း
သင်ငွေပေးချေရာတွင်မှန်ကန်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်သဘောတူသည်။ အကြောင်းအရာကိုသင်မကျေနပ်လျှင် Vogate သည်အကြောင်းအရာဝယ်ယူမှုအများစုအတွက်ရက် ၃၀ ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အကြွေးကိုပေးသည်။
Vogate တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ၏စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည် ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပံ့ပိုးသူများ၏စျေးနှုန်းစနစ်များနှင့်ရောင်းအားအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏မူဝါဒများကြောင့် Vogate ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများ၏စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တီဗီအပလီကေးရှင်းများတွင်ပေးသောစျေးနှုန်းနှင့်လုံးဝမတူနိုင်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပါကသင်မြင်တွေ့ရသည့်ငွေကြေးသည်သင်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ချိန်၌သင်၏တည်နေရာပေါ်မူတည်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုပါကစျေးနှုန်းသည်သင်၏တည်နေရာကိုတိုင်းပြည်အပေါ်အခြေခံသည်။ သုံးစွဲသူများအားအခြားငွေကြေးများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကြည့်ရှုခွင့်မပြုပါ။
ကုန်သွယ်ရေးအခွန်၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခွန်၊ စားသုံးသူရောင်းအားနှင့်သက်ဆိုင်သောအခွန်အခများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်သင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအခွန်ကိုသင့်လျော်သောအခွန်အာဏာပိုင်များထံကောက်ခံခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ သင်မြင်သောစျေးတွင်ဤအခွန်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
သင် ၀ ယ်ယူထားသောအကြောင်းအရာအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်သင်သဘောတူပြီး၊ သင်၏ဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုကောက်ခံရန်သို့မဟုတ်ထိုအခကြေးငွေများအတွက် (Boleto, SEPA၊ တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ကဲ့သို့သော) အခြားငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ Vogate သည်သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ငွေအပေးဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်သင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါတို့ထွက်စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ အသေးစိတ်ကို။
သင် ၀ ယ်ယူသောအခါမမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုမသုံးရန်သင်သဘောတူသည်။ သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်မအောင်မြင်ပါကသင်စာရင်းသွင်းသည့်အကြောင်းအရာကိုသင်ရယူနိုင်သေးပါကကျွန်ုပ်တို့ထံမှအကြောင်းကြားပြီးရက်ပေါင်းသုံးဆယ် (၃၀) အတွင်းသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးရန်သင်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံလောက်သောငွေပေးချေမှုမရရှိသည့်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင် ၀ ယ်ယူထားသောအကြောင်းအရာသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာမဟုတ်ပါက၊ သင် ၀ ယ်ယူပြီးရက် ၃၀ အတွင်း Vogate သည်သင်၏အကောင့်သို့ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထားရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤငွေပြန်အမ်းခြင်းသည်အောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း ၈.၄ တွင်ဖော်ပြထားသော Subscription Plan ဝယ်ယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ငွေပြန်အမ်းငွေကိုသင်၏မူလငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်သို့ငွေပြန်အမ်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ သင်သင်၏ ၀ ယ်ယူထားသောплатформа (၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တီဗီအက်ပလီကေးရှင်း) နှင့်အခြားအချက်များ။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းအာမခံချက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်သင်တောင်းဆိုပါကငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်ယခင်က ၀ ယ်ခဲ့သောအကြောင်းအရာသည်တရား ၀ င်မှုသို့မဟုတ်ပေါ်လစီဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပိတ်ထားလျှင်၊ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လွန်ပြီးငွေပြန်အမ်းခွင့်ရှိသည်။ Vogate သည်ကျောင်းသားများကိုရက်ပေါင်း ၃၀ ထက် ကျော်လွန်၍ ကျောင်းသားများကိုငွေပြန်အမ်းမည်ဆိုပါကသံသယဖြစ်ဖွယ်သို့မဟုတ်အတည်ပြုပြီးအကောင့်လိမ်လည်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အတွက်အဖြစ် ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရောင်းချသူများကကျောင်းသားများသည်ဤငွေပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသဘောတူကြသည်။
သင်၏အကောင့်သို့ငွေပြန်အမ်းခြင်းချေးငွေများထုတ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏နောက်အကြောင်းအရာဝယ်ယူမှုကိုအလိုအလျောက်အသုံးပြုလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း (သို့) တီဗီအပလီကေးရှင်းများတွင် ၀ ယ်ယူရန်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရမလိုအပ်ပါကငွေပြန်အမ်းခြင်းချေးငွေများသည်သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းအသုံးမပြုပါကငွေတန်ဖိုးမရှိနိုင်ပါကသက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်သည်။
သင်၏ငွေပြန်အမ်းခြင်းမူဝါဒကိုသင်အလွဲသုံးစားပြုနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လျှင်၊ သင်ပြန်အမ်းရန်လိုသောအကြောင်းအရာ၏သိသာထင်ရှားသောအပိုင်းကိုစားသုံးခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာကိုယခင်ကပြန်အမ်းလျှင်သင်ငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အခြားအနာဂတ်ပြန်အမ်းငွေများမှသင့်အားကန့်သတ်ရန်၊ သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ပင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအားလုံးကိုကန့်သတ်ရန်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပါကသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုသင်၏ ၀ င်ရောက်မှုကိုပိတ်ထားပါကသင်ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာပေါ်လစီအပိုဆောင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
Vogate သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကျောင်းသားများအတွက်လက်ဆောင်နှင့်မြှင့်တင်ရေးကုဒ်များကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ သင်၏ Vogate အကောင့်အတွက်အသုံးပြုသောလက်ဆောင်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးခရက်ဒစ်များအတွက်အချို့သောကုဒ်များကိုရွေးနုတ်နိုင်သည်၊ ထိုနောက်သင်၏ကုဒ်များပါ ၀ င်သည့်စည်းကမ်းချက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအကြောင်းအရာများကို ၀ ယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားကုဒ်များသည်တိကျသောအကြောင်းအရာအတွက်တိုက်ရိုက်ရွေးနုတ်နိုင်သည်။ လက်ဆောင်နှင့်မြှင့်တင်ရေးခရက်ဒစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း (သို့) တီဗီအပလီကေးရှင်းများတွင် ၀ ယ်ယူရန်မသုံးနိုင်ပါ။
သင်၏ Vogate အကောင့်တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတွင်အသုံးမပြုပါကဤကုဒ်များနှင့်ခရက်ဒစ်များအပြင်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောမြှင့်တင်ရေးတန်ဖိုးများသက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်သည်။ Vogate မှပေးသောလက်ဆောင်နှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုဒ်များသည်သင်၏ကုဒ်များနှင့်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရလိုအပ်သောစည်းကမ်းချက်များတွင်မဖော်ပြထားပါကငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ လက်တွဲဖော်မှပေးသောလက်ဆောင်နှင့်မြှင့်တင်ရေးကုတ်များသည်ထိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ပြန်အမ်းငွေမူဝါဒများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်တွင်အကြွေးပမာဏများစွာသိမ်းဆည်းထားပါကသင်၏ဝယ်ယူမှုကိုမည်သည့်ခရက်ဒစ်ဖြင့်လျှောက်ထားရမည်ကို Vogate ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ထွက်စစ်ဆေးပါ ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာ နှင့်ပိုမိုအသေးစိတ်များအတွက်သင်၏ကုဒ်များနှင့်အတူမည်သည့်ဝေါဟာရများပါဝင်သည်။
Vogate ကိုသာတရား ၀ င်အသုံးပြုရန်သာသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သင်တင်ထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ မေးခွန်းများ၊ ပို့စ်များ၊ သင်ခန်းစာများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်ဥပဒေနှင့်အခြားသူများ၏မူပိုင်ခွင့်များကိုလေးစားသင့်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်အဓိကပြစ်မှုများအတွက်သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ပင်ထားနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏မူပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ချိုးဖောက်နေသည်ဟုသင်ထင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင် ၀ င်ရောက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုကိုတရားမ ၀ င်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီး၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အပြုအမူကိုသင်၏အသုံးပြုမှုသည်သင့်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အမျိုးသားဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်းတို့အတွက်သင်သာတာဝန်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါက ၀ န်ဆောင်မှုများကသင်စာရင်းသွင်းထားသောသင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများကိုရောင်းချသူများအားမေးခွန်းများမေးရန်နှင့်အကြောင်းအရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုတင်ရန်သင့်အားကူညီသည်။ အချို့သောအကြောင်းအရာများအတွက်ရောင်းချသူသည်သင့်အား“ အိမ်စာ” သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများအဖြစ်တင်ပြရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့မဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတင်မတင်ပါနဲ့။
အကယ်၍ သင်သည်ရောင်းချသူဖြစ်ပါကစင်မြင့်ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေရန်အကြောင်းအရာများကိုသင်တင်သွင်းနိုင်ပြီးသင်၏သင်တန်းများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများတွင်စာရင်းသွင်းထားသောကျောင်းသားများနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်သင်သည်ဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးအခြားသူများ၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားရမည်။ သင်၏နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အမျိုးသားဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သောမည်သည့်သင်တန်း၊ မေးခွန်း၊ သင်ပလက်ဖောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သူတို့၏အကျိုးဆက်များမှတစ်ဆင့်သင် တင်၍ ပို့ချသည့်မည်သည့်သင်တန်းများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်သင့်ကိုတာ ၀ န်သာရှိသည်။ တွင်ဖော်ပြထားသောမူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကိုသင်နားလည်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ သင် Vogate တွင်ထုတ်ဝေရန်အတွက်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမတင်သွင်းမီ။
အကယ်၍ သင်၏သင်တန်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာသည်ဥပဒေသို့မဟုတ်အခြားသူတို့၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သတိပေးထားလျှင် (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားသူများ၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်)၊ သင်၏ပါဝင်သောအကြောင်းအရာ (သို့) သင်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အမူအကျင့်သည်တရားမ ၀ င်၊ မသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်ကန့်ကွက်သူဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လျှင် (ဥပမာအားဖြင့်အခြားသူတစ် ဦး အယောင်ဆောင်လျှင်) ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းမှဖယ်ရှားနိုင်သည်။ Vogate သည်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒအားစစ်ဆေးပါ။
Vogate သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်အနေဖြင့်ပေးရမည့်အခကြေးငွေများကိုမပေးဆပ်ပါကဤသတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပါအ ၀ င်အကြောင်းပြချက်မရှိ၊ မသမာသောနည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများအတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးသို့မဟုတ်အစိုးရအေဂျင်စီများ၏တောင်းဆိုမှုအပေါ်၊ မမျှော်လင့်ဘဲနည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများအတွက်လိမ်လည်လှည့်ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံမှုများအတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရပ်စဲခြင်းခံရပြီးနောက်သင်၏အကောင့်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ပလက်ဖောင်းများသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်သင်အားထပ်မံ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တားဆီးနိုင်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားလျှင်ပင်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတို့အတွက်သင်သို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီအတွက်မျှတာဝန်မရှိကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကသင်၏မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ငါတို့ ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းချသူများအားဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာရန်နှင့်အခြားသူများ၏မူပိုင်ခွင့်များကိုလေးစားရန်လိုအပ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုတောင်းဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မည်သို့တင်မည်အကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒကိုကြည့်ပါ။
၅။ သင်တင်သောအကြောင်းအရာကို Vogate ၏အခွင့်အရေး
သင်၏သင်တန်းများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းသို့တင်ထားသောအကြောင်းအရာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမည်သည့်မီဒီယာမှမဆိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့်မျှဝေနိုင်သည်။
ကျောင်းသားသို့မဟုတ်ရောင်းချသူ (သင်ခန်းစာများအပါအ ၀ င်) အနေဖြင့်သင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာသည်သင့်အတွက်သာဖြစ်သည်။ သင်တန်းများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်သင် Vogate အား၎င်းကိုပြန်လည်မျှဝေရန်နှင့်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသင်၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရောင်းချသူဖြစ်ပါက၊ အသေးစိတ်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာလိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များကိုနားလည်ရန်သေချာပါစေ ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ.
အကြောင်းအရာများ၊ မှတ်ချက်များ၊ မေးခွန်းများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြချက်များနှင့်တိုးတက်မှုအသစ်များအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုတင်သွင်းသည့်အခါ Vogate သည်မည်သူမဆိုဤအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်နှင့်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းတွင်မဆိုမည်သည့်မီဒီယာတွင်မဆိုမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်။
တရား ၀ င်သောဘာသာစကားအရအကြောင်းအရာများကိုတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်၎င်းမှတစ်ဆင့်တင်ခြင်း၊ သင်အားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသီးသန့်မဟုတ်သော၊ မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင် (လိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ) ကိုအသုံးပြုရန်၊ ကူးယူရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်၊ (သင်၏အမည်နှင့်ရုပ်ပုံအပါအ ၀ င်) သင်၏အကြောင်းအရာကို (ယခုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်တီထွင်ထားသည့်) မည်သည့်မီဒီယာသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေသည့်နည်းလမ်းများတွင်မဆို၊ ဖြန့်ဝေ၊ ပြသပြီးဖြန့်ဝေပါ။ ၎င်းတွင်သင်၏ပါဝင်မှုများကိုအခြားကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ် Vogate နှင့်တွဲဖက်သူများ၊ အခြားမီဒီယာများတွင်စုစည်းရန်၊ ထုတ်လွှင့်ရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သုံးရန်လည်းကောင်းပါဝင်သည်။ လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ လူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်အခြားအလားတူသောအခွင့်အရေးများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိသင်သည်ထိုအခွင့်အရေးများကိုလည်းသင်ငြင်းပယ်သည်။ သင်တင်ပြသောမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးများ၊ ပါဝါနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးရှိကြောင်းသင်ကိုယ်စားပြုပြီးအာမခံပါသည်။ သင့်အတွက်ပေးဆပ်စရာမလိုပဲသင်၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဤသို့သဘောတူသည်။
၆။ Vogate ကိုသင်၏အန္တရာယ်နှင့်အသုံးပြုခြင်း
မည်သူမဆို Vogate ကို သုံး၍ အကြောင်းအရာများနှင့်ရောင်းချသူများကို ဖန်တီး၍ ထုတ်ဝြေခင်းပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင်ကြားရေးနှင့်သင်ကြားရေးအတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ရောင်းချသူနှင့်ကျောင်းသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုထားသည်။ လူတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့တခြားပလက်ဖောင်းတွေလိုပဲတချို့အရာတွေမှားသွားနိုင်တယ်၊ သင် Vogate ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်နဲ့အတူသုံးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပုံစံသည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေရေးရာပြforနာများအတွက်အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုပါ။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ၏တရားဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြေအနေမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများအပေါ်မည်သည့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ထိန်းချုပ်မှုကိုမှမပြုလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှု၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ အကယ်၍ အကြောင်းအရာကိုသင်ရယူပါကရောင်းချသူမှသင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်စော်ကားမှု၊ Vogate သည်၎င်းအကြောင်းအရာများကိုသင့်ထံမှကာကွယ်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိသင်နှင့်အခြားမည်သည့်သင်တန်းတွင်မဆိုသင်ဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ကျောင်းအပ်ရန်အတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာမဆိုဤအရာသည်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားများ၏ပြင်းထန်သောသဘောသဘာဝရှိမွေးရာပါအန္တရာယ်များနှင့်အန္တရာယ်များကိုသင်အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ၎င်းပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်၊ ရောဂါ၊ ကိုယ်ခန္ဓာဒဏ်ရာ၊ မသန်စွမ်းမှုသို့မဟုတ်သေခြင်းအန္တရာယ်အပါအ ၀ င်ထိုစွန့်စားမှုများကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်လက်ခံရန်ရွေးချယ်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုသင်မရယူမီ၊
သင်ကျောင်းသားသို့မဟုတ်ရောင်းချသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပြုသည့်အခါသင်မျှဝေသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုသတိထားရမည်။ ကျောင်းသားများထံမှသတင်းအချက်အလက်ရောင်းချသူများတောင်းဆိုသည့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားသော်လည်းစင်မြင့်ပေါ်ရှိအခြားအသုံးပြုသူများထံမှသူတို့ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျောင်းသားများနှင့်ရောင်းချသူများကသူတို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်ပါ။ သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်သင်၏အီးမေးလ် (သို့) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမဝေမျှသင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းချသူများကိုငှားရမ်းခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားများအကြားပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ရောင်းချသူများသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သောအငြင်းပွားမှုများ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ဒဏ်ရာများသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပိုင်သို့မဟုတ်မထိန်းချုပ်ထားသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ရှာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းအပါအ ၀ င်ဤတတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်အခြားရှုထောင့်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သင်သည်သူတို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများကိုလည်းဖတ်သင့်သည်။
၇။ Vogate ရဲ့အခွင့်အရေး
၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်အက်ပ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Vogate ပလက်ဖောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများဖန်တီးသောကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်များ၊ API၊ ကုဒ်နှင့်အကြောင်းအရာများအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည်။ သင်နှင့်သူတုိ့သည်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ အသုံးပြု၍ မရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်အပလီကေးရှင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ API များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ပေးသောအကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င် Vogate ပလက်ဖောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င်၊ ရောင်းချသူများနှင့်ကျောင်းသားများသည် Vogate နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူများ၏သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှအခြားဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ မည်သည့်အရာကမှသင့်အား Vogate အမည်သို့မဟုတ် Vogate ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဒိုမိန်းအမည်များနှင့်အခြားထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ်အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ Vogate (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသင်ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည့်မှတ်ချက်များ၊ ထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များသည်လုံးဝဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကသင့်တော်သလိုထင်မြင်ယူဆသည့်အတိုင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း၊
အများသုံးမဟုတ်သည့်နေရာ (အကြောင်းအရာသိုလှောင်မှုအပါအ ၀ င်)၊ Vogate ၏ကွန်ပျူတာစနစ်များသို့မဟုတ် Vogate ၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြန့်ဝေမှုစနစ်များကိုသုံးခြင်း၊
လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တစ်ခုခု၏အားနည်းချက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပလက်ဖောင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုခုကိုပိတ်ပါ၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါ၊ သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။
အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး အားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း (သို့) Vogate ပလက်ဖောင်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများမှမည်သည့်အရင်းအမြစ်ကုဒ်သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည်ကိုမဆိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ် API များမှတဆင့်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို (အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းအားဝင်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားခြင်း (ထို API သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်အညီ) ။ ပင့်ကူ၊ စက်ရုပ်မသုံးပါနှင့်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ င်ရောက်ရန်အခြားမည်သည့်အလိုအလျောက်မဆိုသုံးနိုင်သည်။
မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုအရင်းအမြစ်ဖော်ထုတ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲရန်၊ လှည့်စားရန်သို့မဟုတ်မှားယွင်းစေရန် (ဥပမာ Vogate ဟုမှားယွင်းစွာပေါ်လွင်နေသောအီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေး) ပေးပို့ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုသူ၊ အိမ်ရှင်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်တစ်ခုအားဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဝန်တင်မှုများ၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများ၊ စပန်တာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားစာပို့ခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်အသုံးပြုသူ၊ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်မလိုအပ်သော ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုဖြစ်စေ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊
ဤအပိုင်းသည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ subscription-based collection များကိုသင်၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နောက်ထပ်အသုံးအနှုန်းများကိုဖော်ပြသည်။“ စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်များ”) ။ Subscription Plan ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအပိုင်းရှိအပိုဆောင်းစည်းကမ်းချက်များကိုသင်သဘောတူသည်။ သတိပြုရန်မှာ Vogate အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသုံးပြုခြင်းသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ Vogate နှင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းအကြားသဘောတူညီချက်ဖြင့်သာအုပ်ချုပ်သည်။
၈.၁ Subscription အစီအစဉ်များ
Subscription Plan တွင်သင်စာရင်းသွင်းနေစဉ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ထို Subscription Plan တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှကန့်သတ်ထားသော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်းမရသောလိုင်စင်ကိုသင်ရရှိသည်။ တစ်သက်တာရရှိနိုင်သောလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက် မှလွဲ၍ အထက်ပါ“ ပါဝင်မှုနှင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ” ကဏ္sectionတွင်ပါ ၀ င်သည့်စည်းကမ်းချက်များသည်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သင် ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုသင်၏လက်လှမ်းမီမှုအတိုင်းအတာ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သင်သည်သင်၏ subscription ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အားလွှဲပြောင်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် Subscription Plan တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဥပဒေနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များဖြင့်အသုံးပြုရန်လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Subscription Plan မှတဆင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းရန်အခွင့်အရေးမရှိတော့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သည့်ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များကို“ ပါဝင်မှုစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်တစ်သက်တာလက်လှမ်းမီမှု” အပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည် ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာ။ သင်သည်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုသင်၏စာရင်းသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါကသင်၏ငွေတောင်းခံသည့်ကာလ၏နောက်ဆုံးနေ့တွင်ထိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုသင်အလိုအလျောက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းတွင်သင်သည်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရအခြားလိုအပ်ချက် မှလွဲ၍ သင်၏စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်ပေးဆောင်ပြီးသောမည်သည့်အခကြေးငွေကိုမဆိုငွေပြန်အမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ရယူခွင့်မရှိပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်၊ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသည်သင်၏ Vogate အကောင့်ကိုမရပ်ဆိုင်းတော့ပါ။
သင်၏စာရင်းသွင်းမှုသည်အခမဲ့အစမ်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ရယူသည့်ကာလကိုစာရင်းသွင်းစဉ်အတွင်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ Vogate သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုသို့မဟုတ်ကြာချိန်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ သင်ကအရည်အချင်းပြည့်မီမှုမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းပြီးသင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အခမဲ့ငွေပေးချေမှုကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်၏လာမည့်ငွေတောင်းခံသံသရာအတွက်စာရင်းသွင်းခကိုကောက်ခံပါမည်။ အခမဲ့စမ်းသပ်ကာလမကုန်မီသင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုပါကသင်၏ subscription သည်သင်၏ subscription settings (ဥပမာလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်) အရအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ သင်၏အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကာလ၏သက်ဆိုင်သောအခကြေးငွေများနှင့်ရက်စွဲများကိုမည်သို့ကြည့်ရှုရမည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်ပါ ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာ.
၀ ယ်ယူသည့်အချိန်ကို ၀ ယ်ယူသည့်အချိန်တွင်စာရင်းပေးသွင်းပါလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခကြေးငွေများနှင့်ရက်စွဲများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုပိုမိုလေ့လာရန်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ ငွေပေးချေခြင်း၊ ချေးငွေနှင့်ပြန်အမ်းခြင်းများ” အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏စာရင်းသွင်းခတွင်အခွန်ထပ်တိုးရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နိုင်သည်။ ငွေပေးချေမှုကိုပြန်အမ်းမပေးသောအပြင်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရလိုအပ်လျှင်မဟုတ်လျှင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးပြုသောကာလအတွက်ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်မရှိပါ။ သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ငွေပြန်အမ်းရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်အတွက်ငွေပြန်အမ်းခြင်းမူဝါဒကိုကြည့်ပါ။
Subscription Plan ကိုရယူရန်သင်သည်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်ပေးရမည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုကာလအတွင်းသင့်ငွေတောင်းခံလွှာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခြင်းအားဖြင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ငွေပေးချေသည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငွေစာရင်းရှိသည့်ငွေပေးချေမှုစနစ်မှတဆင့်သက်ဆိုင်သည့်အခကြေးငွေများအတွက်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောအခါသက်တမ်းအတိုင်းအတာအတွက်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေများကိုပေးချေရန်သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ ငွေပေးချေခြင်း၊ ချေးငွေနှင့်ပြန်အမ်းခြင်းများ” အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအဆင့်မြှင့်ပါကသင်၏သက်တမ်းတိုးသည့်ငွေပေးချေမှုသို့ထိုသက်ဆိုင်သည့်အခကြေးငွေများကို ဆက်၍ ဆက်လက်ကောက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ခွင့်ပြုသည်။ နည်းလမ်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်တွင်ရှိသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအားဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါက၊ သို့မဟုတ်သင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသောအခကြေးငွေများကိုအငြင်းပွားနေသော chargeback တစ်ခုကိုသင်တင်ပြပါက chargeback ကိုခွင့်ပြုလျှင်သင်၏ subscription ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရအခြားလိုအပ်ချက် မှလွဲ၍ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုရှိပါသလား၊
၈.၅ Subscription Disclaimers
မည်သည့် Subscription Plan တွင်မဆိုတိကျသောအကြောင်းအရာတစ်ခုခုရရှိနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့် Subscription Plan တွင်ပါ ၀ င်သောအနည်းဆုံးပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်မရှိပါ။ အနာဂတ်၌မည်သည့်အချက်မှာမဆို Subscription Plan ကိုအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအငြင်းပွားမှုများသည်အောက်ဖော်ပြပါ“ စွပ်စွဲချက်များ” ကဏ္listedတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများလည်းပါဝင်သည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်အခြားစာချုပ်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့သည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းအရေးကြီးသောတရား ၀ င်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သည့်အရာများမှကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်တို့၏တရားဝင်ဆက်ဆံရေးကိုရှင်းလင်းစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည် Vogate နှင့်တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်သဘောတူသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်သဘောမတူပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရယူခြင်း၊
အကယ်၍ သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံပြီးကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရသို့မဟုတ်အခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားကိုယ်စားပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူသည်ရောင်းသူဖြစ်ပါကသင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းသင်ကိုယ်စားပြုပြီးခိုင်လုံပါသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာ မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘာသာဖြင့်မဆိုအဆင်ပြေစေရန်ပံ့ပိုးပေးပြီးသင်ပconflictိပက္ခဖြစ်ပွားပါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဟုသင်နားလည်သဘောတူသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များ (ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်သဘောတူညီချက်များနှင့်မူဝါဒများအပါအ ၀ င်) သည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံး (သင်သည်သင်ရောင်းချသူဖြစ်ပါက၊ ရောင်းချသူသတ်မှတ်ချက်များ).
ဤစည်းကမ်းချက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသက်ဆိုင်သောဥပဒေအရမမှန်ကန်တဲ့သို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်သောအရာဟုတွေ့ရှိပါကထိုပြဌာန်းချက်သည်ခိုင်လုံသော၊ ပြဌာန်းထားသောပြable္ဌာန်းချက်၏မူလရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးကျန်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆက်လက်သက်ရောက်မှုရှိစေမည် ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်အမှုတစ်ခုတွင်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းများရှိသော်ငြားလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ နောင်တွင်၎င်းတို့အားပြenfor္ဌာန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ရာသောအခွင့်အရေးများမှတစ်စုံတစ်ရာသောအခွင့်အရေးကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊
အောက်ပါကဏ္sectionsများသည်ဤစည်းကမ်းချက်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေရမည်။ အပိုင်း ၂ (ပါဝင်မှုစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်တစ်သက်တာလက်လှမ်းမီမှု)၊ ၅ (သင်တင်ပို့သည့်အကြောင်းအရာအပေါ် Vogate ၏အခွင့်အရေးများ)၊ ၆ (Vogate ကိုသင့်အန္တရာယ်နှင့်အသုံးပြုခြင်း)၊ ၇ (Vogate ၏အခွင့်အရေးများ)၊ ၈.၅ (Subscription Disclaimers)၊ ၉ (အထွေထွေဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းများ) နှင့် ၁၀ (အငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်) ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကစီစဉ်ထားတဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဆိုက်နှင့်တစ်ခုခုတစ်ခုခုပြိုကျနေသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းချသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏အကြောင်းအရာများတွင်မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လုံခြုံရေးပြissuesနာများလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားသာဓကများ။ ကိစ္စရပ်များသည်အဆင်မပြေသောအခြေအနေမျိုးတွင်မည်သည့်ကိစ္စမျိုးကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်လက်ခံသည်။ တရားဝင်ပိုမိုပြည့်စုံသောဘာသာစကားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို“ ရှိသကဲ့သို့” နှင့်“ ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” အခြေခံပေါ်တွင်ပံ့ပိုးပေးသည်။ လုံခြုံမှု၊ အမှားအယွင်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်၎င်းတို့ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ၏တိကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိုယ်စားပြုချက်သို့မဟုတ်အာမခံချက်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်ပါ။ တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့်ချိုးဖောက်မှုမပါ ၀ င်သောအာမခံထားမှုများအပါအ ၀ င် (ဖော်ပြပါသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော) ။ ကျွန်ုပ်တို့ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အေးဂျင့်များ) သည်သင် ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုမှတိကျသောရလဒ်များကိုသင်ရရှိမည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ (မည်သည့်အကြောင်းအရာအပါအ ၀ င်) ၀ န်ဆောင်မှုများအားသင်၏အသုံးပြုမှုသည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများသည်သက်ဆိုင်ရာအာမခံချက်များဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်အထက်ပါချန်လှပ်မှုများသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုအချိန်မရွေးဖြစ်စေ၊ Vogate နှင့် ၄ င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်အေးဂျင့်များသည်ထိုကဲ့သို့သောပြတ်တောက်မှုများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များမရှိခြင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မျှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်သောအဖြစ်အပျက်များကြောင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲ၊ ရန်လိုမှုသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်; လျှပ်စစ်၊ အင်တာနက်၊ ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အစိုးရကန့်သတ်ချက်များ။
တာဝန်ယူမှု၏ 9.3 ကန့်သတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကယောဂကဲ့သို့ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးသင်ကိုယ်တိုင်အနာတရဖြစ်အောင်လုပ်လျှင်။ ဤအန္တရာယ်များကိုသင်အပြည့်အဝလက်ခံပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုများကြုံတွေ့ရလျှင်ပင်သင့်အနေဖြင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်သင်နည်းလမ်းမရှိကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ တရားဝင်၊ ပိုမိုပြည့်စုံသောဘာသာစကားဖြင့် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအုပ်စုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အေးဂျင့်များ) သည် (ဒေတာ၊ ၀ င်ငွေ၊ အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်းအပါအ ၀ င်) သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့) သေခြင်း) စာချုပ်၊ အာမခံ၊ တရားမ ၀ င်မှု၊ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုများ၊ သင်သို့မဟုတ်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ယူမှု (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအုပ်စုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်အေးဂျင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တာ ၀ န်) သည်ဒေါ်လာတစ်ရာ (ဒေါ်လာ ၁၀၀) ထက်ပိုသောပမာဏသို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးချေသည့်ပမာဏကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ (၁၂) လအကြာတွင်သင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများသည်နောက်ဆက်တွဲသို့မဟုတ်မတော်တဆထိခိုက်မှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းများကိုခွင့်မပြုပါ။
အကယ်၍ သင်ကကျွန်ုပ်တို့အားဥပဒေရေးရာပြtroubleနာများကြုံတွေ့စေသည့်နည်းလမ်းအတိုင်းပြုမူပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့မှတရား ၀ င်နည်းလမ်းများအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအုပ်စုများနှင့်၎င်းတို့၏အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အေးဂျင့်များအားတတိယပါတီ၏တောင်းဆိုမှုများ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ရန်သင်သဘောတူသည်။ (က) သင် ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်း (ဂ) ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ()) တတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကုန်ကျစရိတ်များ (ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေခအပါအဝင်) သင်၏လျော်ကြေးပေးရန်တာ ၀ န်သည်ဤစည်းကမ်းချက်များရပ်ဆိုင်းသွားခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်။
ဤဝေါဟာရများကိုဖော်ပြတဲ့အခါ "Vogate" သူတို့ကသင်နဲ့စာချုပ်ထားတဲ့ Vogate entity ကိုရည်ညွှန်းတယ်။ သင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအဖွဲ့အစည်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေသည်သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အိန္ဒိယမှမဟုတ်သောပထဝီဒေသတစ်ခုတွင်သင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အသုံးပြုနေပါက Vogate နှင့်သင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ၎င်း၏ရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်ဥပဒေအခြေခံမူပconflictsိပက္ခများရန်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း” ကဏ္ you သည်သင်နှင့်မကိုက်ညီပါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိသီးသန့်စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပြည်နယ်တရားရုံးများ၏နေရာကိုသင်သဘောတူသည်။
ဤကန့်သတ်ချက်ကိုဥပဒေအရပြcannot္ဌာန်း။ မရပါက လွဲ၍ အရေးယူမှုအကြောင်းအရင်းပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်တစ်နှစ် (၁) နှစ်ထက်မပိုသောပါတီများမှဤသဘောတူညီချက်မှပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အရေးယူမှုကိုမဆိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသိပေးချက်သို့မဟုတ်အခြားဆက်သွယ်မှုများသည်စာဖြင့်ရေးသား။ မှတ်ပုံတင်ထားသောသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုစာတိုက်မှပြန်လည်ပေးပို့သည့်တောင်းခံစာ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ (သင်၏အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေသင် notices@Vogate.com သို့ဖြစ်စေ) မှပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ကန်ထရိုက်တာသို့မဟုတ်အေဂျင်စီဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများအကြားကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်မရှိကြောင်းသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။
သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ (သို့မဟုတ်၎င်းတို့အောက်ရှိခွင့်ပြုထားသောအခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်များ) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်အကောင့်တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ထားပါကသင်၏အကောင့်ကိုအခြားဝန်ထမ်းသို့လွှဲပြောင်း။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များ (သို့မဟုတ်၎င်းတို့အောက်ရှိခွင့်ပြုထားသောလိုင်စင်များ) ကိုအခြားကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များတွင်မည်သည့်အရာကမျှတတိယပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအားမည်သည့်အခွင့်အရေး၊ သင်၏အကောင့်ကိုလွှဲပြောင်း။ မရကြောင်း၊ သင်၏စည်းကမ်းချက်များအရသင်၏အကောင့်နှင့်အခြားအခွင့်အရေးများအားလုံးသည်သင်၏သေဆုံးမှုအပေါ်အဆုံးသတ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
သင် (၀ န်ဆောင်မှုများကိုကိုယ်စားပြုသောသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်) (သို့မဟုတ်ကျူးဘားကဲ့သို့သောအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို) ခံရသည့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနေထိုင်သူသို့မဟုတ်နေထိုင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်အာမခံပါသည်။ ၊ အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယားသို့မဟုတ်ယူကရိန်း၏ခရိုင်းမီးယားဒေသ) ။ သင်သည်မည်သည့်အမေရိကန်အစိုးရ၏အထူးသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခံထားရသောစာရင်းတွင်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းသင်အာမခံပါသည်။
Vogate နှင့်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ကာလအတွင်းသင်သည်ထိုသို့သောကန့်သတ်မှုခံရပါက ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရှေ့တွင်မည်သည့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားကိုမဆိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီးသင့်အတွက်နောက်ထပ်တာ ၀ န်မရှိပါ။ Vogate အတွက်သင်၏ထူးခြားသောတာဝန်ဝတ္တရားများမပါဘဲ) ။
သင်သည်မည်သည့်အမေရိကန်နှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောနိုင်ငံ၏ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုမဆိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမဆိုတိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်။ ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း၊ ဥပဒေများ, စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများ။ ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများအောက်တွင်တင်ပို့မှုကိုအထူးထိန်းချုပ်ထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ (မည်သည့်နည်းပညာ) (စာဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အပါအဝင်) ကိုတင်ရန်သင်သဘောတူသည်။
အငြင်းပွားမှုတစ်ခုရှိရင်ငါတို့ Support Team သို့ ပြresolveနာကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီရန်ပျော်ရွှင်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ကနေဒါတွင်နေထိုင်ပါကသင်၏ရွေးချယ်မှုများသည်အမှုငယ်များဆိုင်ရာတရားရုံးသို့သွားရန်သို့မဟုတ်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင်အမှုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ အခြားတရားရုံးတွင်သင်တောင်းဆိုချက်ကိုယူဆောင်လာခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သောလူတန်းစားအရေးယူမှုတောင်းဆိုချက်တွင်သင်ပါဝင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
ဤအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းကဏ္ you သည်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ကနေဒါတွင်နေထိုင်မှသာလျှင်အကျုံးဝင်သည်။ အငြင်းပွားမှုအများစုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တရား ၀ င်တရား ၀ င်အမှုတစ်ခုမဆောင်မီ၊ ငါတို့နှင့်အရင်ဆက်သွယ်ပါ Support Team သို့.
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ဦး အနေဖြင့် (က) ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ (ခ) သင်နေထိုင်သောခရိုင်ရှိအငယ်စားတောင်းဆိုမှုများတရားရုံးသို့တိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ (ဂ) ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသဘောတူသည့်အခြားနေရာတွင်၎င်းကိုယူဆောင်လာရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသဖြင့် တရားရုံး။
10.2 အနုညာတစီရင် Going
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အငြင်းပွားမှုကိုပြေလည်စွာမဖြေရှင်းနိုင်ပါကသင်နှင့် Vogate သည်မည်သည့်ပြောဆိုချက်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်တရား ၀ င်သီအိုရီပင်ဖြစ်ပါစေဤနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များ (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားဥပဒေရေးရာအသုံးအနှုန်းများ) နှင့်သက်ဆိုင်သောတောင်းဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်သင်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှတစ် ဦး သည်တရားရုံးတွင်အငြင်းပွားမှုရှိသင့်ပြီးအခြားတစ်ဖက်က၎င်းအားခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ငြင်းဆန်ပါကအခြားပါတီကကျွန်ုပ်တို့အားနှစ် ဦး စလုံးအားခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် (အတင်းအကျပ်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ခြင်း) အားခိုင်းစေနိုင်သည်။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆက်လက်ပြုလုပ်နေစဉ်တရားရုံး၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမတောင်းဆိုနိုင်ပါ။
ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ထက်မပိုသောတောင်းဆိုမှုများပါ ၀ င်သောအငြင်းပွားမှုများကိုပုံစံမတူသည့်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်သာသီးသန့်ဖြေရှင်းရမည်။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်သူကိုရွေးချယ်သောပါတီသည်အနုညာတစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုအားအမေရိကန်အနုညာတစီရင်ခြင်းအသင်း (AAA) သို့ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုကိုစတင်ရမည်။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို AAA ၏ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ စားသုံးသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အငြင်းပွားမှုများအားဖြေရှင်းရန်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရမည်။ တရားစွဲဆိုမှုကိုအောက်ပါစည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်နာလိမ့်မည်ဟုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည် - (က) ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြင့်သာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည် (သက်သာရာရရန်ရွေးချယ်သူများ၏ရွေးချယ်မှုတွင်); (ခ) ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပါတီများ (သို့) မျက်မြင်သက်သေများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသွင်ပြင်လက္ခဏာများမပါ ၀ င်ရပါ။ နှင့် (ဂ) ခုံသမာဓိလူကြီး၏စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မည်သည့်တရားရုံးတွင်မဆိုအရည်အချင်းရှိသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ထက်ပိုသောတောင်းဆိုမှုများပါ ၀ င်သောအငြင်းပွားမှုများအား AAA ၏စည်းမျဉ်းများအရခုံသမာဓိစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကြားနာခြင်းအားလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်များကိုဖြေရှင်းရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြန်အလှန်တောင်းဆိုမှုများကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသဘောတူသည်။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်: (က) ကျွန်တော်တို့ကိုမတစ် ဦး လူတန်းစားအရေးယူမှု, စုပေါင်းအရေးယူ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အရေးယူအတွက်တရားလိုသို့မဟုတ်လူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အဖြစ်ပြောဆိုချက်ကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်; (ခ) ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်သူသည်လူအများစု၏တောင်းဆိုမှုများကိုအမှုတစ်ခုတည်း (သို့မဟုတ်စုစည်းထားသော၊ လူတန်းစားသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ဦး စီး။ ) မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ (ဂ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏အမှု၌ခုံသမာဓိရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အခြားအသုံးပြုသူများကိုသာအသုံးပြုသူကိုသာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီးအခြားအသုံးပြုသူများ၏အငြင်းပွားမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အကယ်၍ တရားရုံးမှဤ“ မည်သည့်အတန်းအစားအရေးယူမှု” အပိုဒ်ကိုအတည်မပြုနိုင်ပါသို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပါကဤ“ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း” ကဏ္ n သည်ပျက်ပြယ်သွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျန်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမည်။
အောက်ဖော်ပြပါ“ ဤအချက်အလက်များအားအသစ်ပြောင်းခြင်း” အပိုင်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ Vogate သည်ဤ“ သတ်မှတ်ချက်များအားလက်ခံခြင်း” ကိုနောက်ဆုံးဖော်ပြပြီးသည့်နောက်တွင်“ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း” အပိုင်းကိုပြောင်းလဲပါက၊ Vogate အားထိုကဲ့သို့ငြင်းပယ်မှုကိုစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Vogate Attn: ဥပဒေကြောင်းအရသို့မဟုတ်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော” ဘာသာစကားဖြင့်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း၊ ပြောင်းလဲမှုသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း notices@Vogate.com သို့သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှ notices@Vogate.com သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဝင်ရောက်သည်။ ထိရောက်စေရန်၊ ထိုအသိပေးချက်တွင်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံပါ ၀ င်ပြီးဤ“ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း” ကဏ္ changes ကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရမည်။ အပြောင်းအလဲများကိုငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံကြောင်းနောက်ဆုံးဖော်ပြသည့် နေ့မှစ၍ ဤ“ အငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်” အပိုင်းပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များအရသင်နှင့် Vogate အကြားမည်သည့်အငြင်းပွားမှုကိုမဆိုခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရှင်းလင်းရန်သို့မဟုတ်အသစ်သောသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောအလေ့အကျင့်များ (ဥပမာအင်္ဂါရပ်အသစ်များထည့်သည့်အခါ) ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်အတွက်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Vogate သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုပြုပြင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အချိန်မရွေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ပါကသင်၏အကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်အသိပေးစာတင်ခြင်းကဲ့သို့သောထင်ရှားသောနည်းလမ်းများဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်သူတို့တင်ထားသည့်နေ့တွင်မဟုတ်ပါကဖော်ပြခြင်းမရှိပါကထိရောက်လိမ့်မည်။
အပြောင်းအလဲများဖြစ်လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုသင်လက်ခံသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောမည်သည့်သတ်မှတ်ချက်များမဆိုယခင်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးထက်ကျော်လွန်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည် Support Team သို့။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မေးခွန်းများ၊ စိုးရိမ်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားလိုပါသည်။
Google က Flutter
Google ကြော်ငြာများ (Adwords)
Microsoft 70-741: Windows Server 2016 နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း £275.00
အင်တာနက် & ကွန်ပျူတာမိတ်ဆက် - အွန်လိုင်းသင်တန်းသင်တန်း £75.00
CompTIA အိုင်တီအခြေခံများလက်မှတ်ရ £200.00
IT Security Specialist Training Pack ကို (Microsoft, CompTIA & Cisco နှင့်) £875.00
စီးပွားရေးစာပေးစာယူသင်တန်းနှင့်အတူအဆင့် 1,2&3တရုတ် Mandarin £150.00
mcsa sql server ကို
mcse sql ဆာဗာ 2012